လူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ် ဘာကြောင့် မရပ်တည်နိုင်ရမှာလဲ ! - News @ M-Media
လူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ် ဘာကြောင့် မရပ်တည်နိုင်ရမှာလဲ !
in Our Perspectives — October 1, 2012
အောက်တိုဘာ၊ ၁ ၊ ၂၀၁၂
မကြာတော့တဲ့ ကာလမှာ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူတော့မှာဆိုတဲ့အတွက် ကျွန်မတို့တွေက ကိုယ့်ကိုယ့်ကို သေချာဂဃနဏသိပြီး ရဲရဲဝင့်ဝင့် ထုတ်ဖော်ပြောရဲကြရပါမယ်။ ဒီအတွက် ကျွန်တို့တွေဘက်ကလိုအပ်တာတွေကိုလည်း အခုကတည်းက ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်။ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ဇယား (Family tree)ကို ကိုယ်တိုင်လက်ကိုင်ထားရှိဖို့လည်း ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့တွေမှာ အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ မှတ်ပုံတင်လို့လည်းပြောကြတဲ့ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လက်ဝယ်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ရကြသူတွေ ရှိသလို အဲဒီကတ်ကိုလက်ဝယ်ကိုင်ဆောင် ခွင့်မရသေးတဲ့သူတွေလည်း အများကြီးရှိနေပါတယ်။ ဒီကတ်ပြားမှာ လူမျိုး၊ ဘာသာ လို့ပါရှိတာကြောင့် ကျွန်မတို့တွေဟာ လူမျိုးနဲ့ ဘာသာကို သေချာပေါက်ထည့်ရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်တာနဲ့ လူမျိုးနေရာမှာ အလိုလိုနေရင်း နိုင်ငံခြားက လူမျိုးတွေကို ထည့်ခြင်းခံရပါတယ်။ ဒါကတော့ အများစုလည်း သိပြီးသား ကိစ္စတွေပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့တွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိထားဖို့က မြန်မာနိုင်ငံထဲက အစ္စလာမ်သာသနာ သက်ဝင်ယုံကြည်သူ ကျွန်မတို့တွေဟာ တစ်ခြားဘယ်နိုင်ငံသားမှ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဟိုး ဘိုးဘေးဘီဘင်တွေ လက်ထက်ကတည်းက အမိမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့ကြလို့ပါ။
ဒီနေရာ တစ်ခုပြောချင်တာက အခုလက်ရှိကိုင်ဆောင်နေကြတဲ့ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား ဆိုတာဟာလည်း လုံးဝကို ယုတ္တိမရှိ သဘာဝမကျပါဘူး။ နာမည်ကိုက နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးတဲ့။ ဒီတော့ နိုင်ငံသားလို့အသိအမှတ်ပြုတာမဟုတ်သေးပဲနဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ စိစစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောသက်ရောက်နေပါတယ်။ ဒီတော့ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ ဘယ်လူမျိုး ဘယ်တိုင်းရင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီနိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူတွေ အားလုံးဟာ နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်း မခံရသေးပဲ စိစစ်နေဆဲလုိ့ အဓိပ္ပါယ်ယူလို့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် မြန်မာတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများနည်းတူ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ကိုင်ဆောင်ထားကြသူချင်းအတူတူ ငါတို့နိုင်ငံက ထွက်သွား၊ ပြန်သွားဆိုပြီး နားမလည်ပဲ လျှောက်အော်နေတာတွေကို ဂရုမစိုက်ပဲ ကိုယ်လုပ်သင့်တာတွေကို စဉ်းစားလုပ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။
ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံထဲက ကျွန်မတို့မွတ်စလင်မ်တွေမှာရှိနေတဲ့ အတွေးတစ်ခုက အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး တစ်ခြားနိုင်ငံတွေမှာ ဘာလူမျိုးလို့ခွဲခြားနေတာမျိုး မဟုတ်ပဲ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုပဲ ဦးစားပေးတွေးနေကြတာပါ။ ဟုတ်ပါတယ် အဲဒါက တစ်ခြားနိုင်ငံတွေ အတွက် နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုပဲ ဦးစားပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ အမိမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ မှီတင်းနေထိုင်တာဖြစ်လို့ ကျွန်မတို့တွေမှာလည်း ရှိရင်းစွဲလူမျိုးစုအတိုင်း ဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့လိုပါတယ်။ အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိ ရှိနေကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေဟာ ကိုယ့်လူမျိုးစုအတွက် ကိုယ်မားမားရပ်တည်နေကြပါတယ်။ ကျွန်မတို့တွေလည်း ရှိရင်းစွဲ လူမျိုးအနေနဲ့မားမားရပ်တည်ဖို့ကို လုံးဝမမေ့လျော့သင့်ပါဘူး၊ အတွေးမလွဲသင့်ပါဘူး။ ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း စတဲ့ ကိုယ့်လူမျိုးအလိုက် အစ္စလာမ်သာသနာကို သက်ဝင် ယုံကြည်နေကြသလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို လူမျိုးပျောက်နေကြတဲ့ ကျွန်မတို့တွေဟာ လူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ် ဘာကြောင့် မရပ်တည်နိုင်ရမှာလဲ !
Tags: အတွေးအမြင်, မြန်မာမွတ်စလင်မ်